SD oo markale aan lagu casuumin xaflada Nobelka | Somaliska
SD oo markale aan lagu casuumin xaflada Nobelka
Gudoomiyaha xisbiga Sverige Demokraterna (SD) Jimmie Åkesson iyo ku xigeenka afhayeenka Baarlamaanka Björn Söder ayaa sanadkii 4-aad laga reebay madaxda lagu casuumay xaflada bixinta biladaha Nobelka ee bisha December ka dhici doonta Stockholm. Sida caadiga ah waxaa xaflada lagu casuumaa dhamaan hogaamiyaasha xisbiyada ka tirsan baarlamaanka Sweden iyo gudoomiyaha baarlamaanka.
Gudiga Nobelka ayaa ilaa sanadkii 2010 ee xisbiga SD uu soo galay baarlamaanka ka reebay Jimmie Åkesson in uu ka qeyb galo xaflada Nobelka iyagoo ku micneeyay go’aankooda in siyaasada SD ay ka soo horjeedo fikradaha gudiga Nobelka iyo xasuusta ninkii aasaasay Nobelka ee lagu magacaabo Alfred Nobel kaasoo aaminsanaa in jinsiyadaha dadka aysan micno lahayn.
Afhayeenka xisbiga SD Martin Kinnunen oo ka jawaabay hadalka gudiga Nobelka ayaa telefishinka SVT u sheegay in aysan SD u ooyeyn in ay ka qeyb galaan xaflada Nobelka. Isagoo intaas ku daray in Jimmie Åkesson iyo Björn Söder aysan siyaasada u galin in ay ka qeyb galaan xaflado balse ay la yaabtahay in xisbiga sadexaad ee ugu weyn Sweden laga mamnuuco xaflada Nobelka.
Sidee u aragtaa 8-da Maarso?
Haweeneey loo xiray gudniin ay samaysay